DroppTV: Adeegsiga AI si loo aqoonsado loona iibiyo alaabada fiidiyowyada | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 20, 2020 Isniin, Janaayo 18, 2021 Douglas Karr
Noocyadu waxay sii kordhayaan adeegsiga tikniyoolajiyadda si ay u abuuraan khibrado ganacsi oo cusub xilligii guri-joogga. Iyo, isla markaa, warshadaha madadaalada ayaa lagu qasbay inay raadsadaan ilo dakhli oo kale xilli tiyaatarada iyo goobaha muusigga la xiray.
Ku qor droppTV. Ku soo bandhigida fiidiyowyada muusikada, droppTV waxay u oggolaaneysaa dhagaystayaasha inay daawadaan waxyaabaha iyaga oo si habsami leh u baaraya dukaanno pop-up isku-dhafan oo isku dhafan si ay u iibsadaan dharka waddooyinka xaddidan. Barxadku wuxuu u suurta geliyaa abuurayaasha (iyo noocyada) inay lacag ka helaan fiidiyowyadooda, bandhigyadooda, iyo filimadooda iyagoo adeegsanaya tikniyoolajiyad casri ah oo casri ah oo AI ah.
droppTV waxaa si gaar ah diirada loogu saaray hal abuurka hada - carqaladeynta xayeysiinta dhaqameed, tafaariiqda, iyo muuqaalka muuqaalka. Waa barxad geyn oo laga iibsan karo isgoyska muusikada, dhaqanka, moodada, iyo dadka caanka ah ee awood u siiya farshaxan-yahannada inay ku abuuraan dukaanno pop-up muuqaal ah fiidiyowyadooda muusigga si ay u iibin karaan badeecadooda, daabacaadda kooban, iyo dharka dharka lagu raaxeysto.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ka caawinno farshaxanno iyo taageerayaal inay ogaadaan oo ay isku xirmaan midba midka kale si qoto dheer. Fiidiyowyada muusiggu waa kuwo aad u gaar ah maadaama ay ku sugan yihiin isgoyska dhaqanka, farshaxanka, muusikada, iyo moodada waxayna ahaayeen xulashada ugu cad ee dalabkii ugu ballaadhnaa ee tikniyoolajiyadeena.
Gurps Rai, agaasimaha guud ee droppTV & Aasaasaha
Madashu waxay isticmaashaa sirdoonka macmal si loo ogaado waxyaabaha ku dhex jira fiidiyowyada, u oggolaanshaha abuuraha ama milkiilaha fiidiyaha inay lacag ka helaan fiidiyaha iyagoo si toos ah ugu iibinaya wax soo saarka. Tani waa horumar la yaab leh oo xagga tiknoolajiyadda ah oo leh tanno suurtagal ah.
Barxadda waxaa ku shaqeeya shirkadda sirdoonkeeda macmalka ah, barashada mashiinka, iyo algorithm-ka aragtida kombiyuutarka. Daawadayaashu way daawan karaan oo wax ku iibsan karaan qalab kasta - taleefannada casriga ah, kiniiniga, ama miisaska. Barnaamijka mobilada ayaa hadda la heli karaa macruufka iyo on Android waxaana goor dhow laga heli doonaa AppleTV.
Qiyaas adeegyada qulqulka ah ee lacag ku bixinaya fiidiyow kasta oo leh waxyaabo badan oo kulkulul oo alaab ah oo ku baahsan fiidiyowyada oo dhan kuna xidhan gaadhigii. Ama, laga yaabee haddii aad tahay astaan, waxaad kireysan kartaa abuuraha oo aad ku qori kartaa saameyntooda si aad toos uga iibiso alaabtaada fiidiyaha.
Waxaan gebi ahaanba arki karay Amazon, mustaqbalka dhow, anigoo siinaya fursad aan ku furo daaqad wax laga iibsado inta aad daawaneysid FireTV-gaaga, oo aad u wareegeyso sheyga shaashadda, ka dibna ku darya gaarigaaga wax iibsiga ee Amazon.
Tani waa mustaqbalka ganacsiga waxyaabaha ku kexeeya, qaadashada tafaariiq dhaqameedka iyo moodellada fiidiyowga ah oo lagu buuxiyo si loo abuuro wax cusub si loo gaaro macaamilka ay wadaan Eeg. Rabtaa Iibso. rabitaan
Haddii aad xiisaynayso inaad u isticmaasho dropp.tv macmiil ahaan, waad iska qori kartaa halkan:
Samee Xisaab Dropp.tv
Tags: aiqashindaal.tvsaameynsuuqgeynta suuqgeyntamuusikada muusigaecommerce video